UYIFAKA NJANI I-ADB (I-ANDROID DEBUG BRIDGE) KWI WINDOWS 10 - ITHAMBILE
Uyifaka njani i-ADB (i-Android Debug Bridge) kwi Windows 10
Uyifaka njani iADB Windows 10: Akunakwenzeka ukuba uphathe iilaptops okanye iidesktops naphi na apho uya khona. Endaweni yokuba uphathe iiselfowuni onokuzisebenzisela iinjongo ezahlukeneyo njengokufowuna, ukuthatha iifoto, iividiyo, amaxwebhu, njl. Kodwa ingxaki ngeefowuni eziphathwayo kukuba iza nememori encinci kwaye xa imemori iqala ukugcwalisa, ke wena kufuneka idlulise yonke okanye enye yedatha yayo kwenye indawo ikhuselekile. Kwaye uninzi lwabantu ludlulisela idatha yabo yeselfowuni kwiPC yabo njengelona nyathelo linengqiqo. Kodwa umbuzo uphakama uyidlulisa njani idatha yakho kwiifowuni eziphathwayo ukuya kwiPC?
Impendulo yalo mbuzo yi-ADB(Ibhulorho yokususa i-Android).Ke, iiWindows zibonelelwa ngeADB ekuvumela ukuba uqhagamshele iiPC zakho kwiifowuni zakho ze-android. Masingene kancinci ukuze siqonde ukuba yintoni i-ADB:
IADB: I-ADB imele i-Android Debug Bridge eyiSoftware-ujongano lweNkqubo ye-Android. Ngokobuchwephesha, isetyenziselwa ukuqhagamshela isixhobo se-android kunye nekhompyuter usebenzisa intambo ye-USB okanye ukusebenzisa uqhagamshelo olungenazingcingo njengeBluetooth. Inceda nasekuqhubeni imiyalelo kwifowuni yakho ephathekayo ngeekhompyuter zakho kwaye ikuvumela ukuba udlulise idatha ukusuka kwiifowuni ze-Android ukuya kwiPC yakho. I-ADB yinxalenye ye-Android SDK (iSoftware Development Kit).
I-ADB inokusetyenziswa nge-Command Line (CMD) yeWindows. Olona ncedo lwayo iphambili kukufikelela ukufikelela kwimixholo yefowuni njengeefayile zekopi ukusuka kwikhompyuter ukuya kwiifowuni okanye kwifowuni ukuya kwikhompyuter, ukufaka kunye nokukhipha nayiphi na iapp kunye nokunye, ngokuthe ngqo ngokusebenzisa ikhompyuter ngaphandle kokunxibelelana nefowuni.
Indlela yoku-1 -Fakela izixhobo zoMyalelo we-SDK ye-Android
Indlela yesi-2-Nika amandla ukulungiswa kwe-USB kwifowuni
Indlela yesi-3-Uvavanyo lwe-ADB (i-Android Debug Bridge)
Indlela 4 -Fakela uMqhubi ofanelekileyo
Indlela yesi-5-Yongeza i-ADB kwiNkqubo yeNdlela
Ukuze usebenzise umgca we-ADB wokuyalela, kuya kufuneka uyifake kuqala kwikhompyuter yakho.Ukufaka i-ADB kwiikhompyuter zakho landela la manyathelo alandelayo:
Ndwendwela iwebhusayithi kwaye uhambe uye kwi-Command line tools kuphela. Cofa apha izixhobo ze-sdk-windows ukukhuphela izixhobo ze-SDK yeWindows.
2. Jonga ibhokisi kufutshane ne Ndiyifundile kwaye ndiyavumelana nale migaqo nemiqathango ingasentla . Emva koko cofa apha Khuphela izixhobo zoMyalelo we-Android yeWindows . Ukukhuphela kuya kuqala kungekudala.
3 Xa ukukhuphela kugqityiwe, vula ifayile ye-zip ekhutshelweyo. Iifayile ze-ADB phantsi kwe-zip ziyaphatheka ukuze uzikhuphe naphi na apho uthanda khona.
4.Vula ifayile ye- ifolda engavulelwanga.
5. Ngoku cofa kabini kwifayile bin ifolda ukuyivula. Ngoku chwetheza cmd Kwibha yedilesi yeFayile Explorer kwaye ucofe u-Enter ukuvula Umyalelo oboqayo .
isilele ukuhlaziya kwiwindows 10 inguqulelo 1709
6.Ukuyalelwa ngokukhawuleza kuya kuvulwa kule ndlela ingentla.
7. Sebenzisa lo myalelo ungezantsi kumyalelo wokuya kwi khuphela kwaye ufake izixhobo zeQonga le-Android SDK:
iqonga lezixhobo zeqonga; i-android-28
8.Uya kukhuthaza ukuba uchwetheze (y / N) yemvume. Chwetheza u-ewe.
9. Ngokukhawuleza ukuba uchwetheze ewe, ukukhuphela kuya kuqala.
Emva kokukhuphela kugqityiwe, vala isikhawulezisi somyalelo.
Zonke izixhobo zakho zeqonga le-Android SDK ziya kukhutshelwa kwaye zifakwe ngoku. Ngoku ufake ngempumelelo i-ADB Windows 10.
Sebenzisa isixhobo somyalelo we-ADB, okokuqala, kuya kufuneka wenze ifayile ye- Isici sokulungisa iphutha le-USB yefowuni yakho ye-Android.Ukwenza njalo landela la manyathelo alandelayo:
1 Vula ifowuni yakho useto kwaye ucofe ku Malunga nefowuni.
2. Ngaphantsi kwefowuni, khangela Yakha inombolo okanye inguqulelo ye-MIUI.
Cofa amaxesha angama-7-8 kwinani lokwakha kwaye emva koko uza kubona apop esithi Ungumphuhlisi ngoku! Kwiskrini sakho.
4. Phinda ubuyele kwiscreen seSeto kwaye ujonge ifayile ye Useto olongezelelweyo ukhetho.
5. Ngaphantsi koseto olongezelelweyo, cofa ku Ukhetho lomphuhlisi.
6. Ngaphantsi kokukhethwa koMthuthukisi, jonga ukulungiswa kwe-USB.
7.Toggle kwiqhosha phambi kwe-USB. Umyalezo wokuqinisekisa uya kuvela kwiscreen, cofa nje KULUNGILE.
8.Your Ukulungiswa kwe-USB kuvunyelwe kwaye ukulungele ukusebenzisa.
uthungelwano lwendawo yengingqi alunaso isakhelo esisebenzayo se-ip
Nje ukuba ulandele la manyathelo angentla, emva koko uqhagamshele ifowuni yakho ye-Android kwiPC, iya kucela ubungqina bokuvumela ukusebenzisa i-USB kwiFowuni yakho, cofa nje Kulungile ukuyivumela.
Ngoku kufuneka uvavanye izixhobo zeqonga le-SDK kwaye ubone ukuba isebenza ngokufanelekileyo kwaye iyahambelana nesixhobo sakho.
1 Vula ifolda apho ukhuphele kwaye ufake ifayile Izixhobo zeqonga le-SDK.
2.Vula Umyalelo oboqayo Ngokuchwetheza cmd kwibha yedilesi kwaye ucofe u-Enter.Umyalelo wokuyalela uya kuvula.
3. Ngoku ukudibanisa ifowuni yakho Android Computer usebenzisa intambo USB ukuvavanya ukuba okanye hayi ADB isebenza kakuhle. Ukuyivavanya, sebenzisa lo myalelo ulandelayo kwi-cmd kwaye ucofe u-Enter:
Uluhlu lwe-4 lwazo zonke izixhobo eziqhagamshelwe kwikhompyuter yakho ziya kubonakala kwaye isixhobo sakho se-Android siya kuba sinye sazo.
Ngoku uyifakile i-ADB Windows 10, yenze ukuba ukhetho lokulungisa i-USB luye kwi-Android kwaye wavavanya i-ADB kwisixhobo sakho. Koda mnaf khange usifumane isixhobo sakho kuluhlu olungentla emva koko kuya kufuneka ufake umqhubi ofanelekileyo kwisixhobo sakho.
Phawula: Eli nyathelo lifuneka kuphela ukuba awufumananga isixhobo sakho kuluhlu olungentla xa uqhuba umyalelo izixhobo zeadb. Ukuba sele ufumene isixhobo sakho kolu luhlu lungentla, tsiba eli nyathelo kwaye uqhubele kwelilandelayo.
Okokuqala, khuphela ipakethe yomqhubi yesixhobo sakho kumenzi wefowuni yakho. Ke intloko kwiwebhusayithi yabo kwaye ufumane abaqhubi besixhobo sakho. Unokukhangela kwakhona Abaphuhlisi beXDA ukhuphelo lomqhubi ngaphandle kwesoftware eyongezelelweyo. Nje ukuba ukhuphele phantsi umqhubi, kuya kufuneka uzifakele usebenzisa esi sikhokelo silandelayo:
2.Kusuka kuMphathi weSixhobo cofa apha Izixhobo eziphathekayo.
3. Uya kuyifumana ifowuni yakho ye-Android phantsi kwezixhobo eziPhathwayo. Cofa ekunene kuyo kwaye ucofe kuyo Iipropati.
4.Tshintshela kwi Umqhubi ithebhu phantsi kweefestile zeefowuni zeefowuni.
5.Ngaphantsi kwethebhu yoMqhubi, cofa apha Hlaziya umqhubi.
6. Ibhokisi yencoko iya kuvela. Cofa apha Bhrawuza ikhompyuter yam ngesoftware yomqhubi.
7.Browse ukukhangela isoftware yomqhubi kwikhompyuter yakho kwaye ucofe Okulandelayo.
iadaptha yenethiwekhi ilahlekile windows 10
Uluhlu lwabaqhubi abakhoyo luya kuvela kwaye ucofe ku Faka ifayile ukuzifaka.
Emva kokugqiba le nkqubo ingentla, landela indlela ye-3 kwakhona kwaye ngoku uya kufumana isixhobo sakho kuluhlu lwezixhobo eziqhotyoshelweyo.
Eli nyathelo likhethwa ngokuzikhethela njengoko kuphela inzuzo yeli nyathelo kukuba awuyi kufuna ukutyelela yonke ifolda ye-ADB ukuvula i-Command Prompt. Uyakwazi ukuvula i-Command Prompt ngalo lonke ixesha ufuna ukusebenzisa emva kokongeza i-ADB kwiNdlela yeNkqubo yeWindows. Nje ukuba uyongeze, unokuchwetheza i-adb kwiwindows Command Prompt nanini na ufuna ukuyisebenzisa kwaye nokuba ungakowuphi umkhombandlela.Ukongeza i-ADB kwiNkqubo yeWindows yeWindows landela amanyathelo angezantsi:
Cinezela i-Windows Key + R emva koko uchwetheze sysdm.cpl kwaye ucofe u-Enter ukuvula Iimpawu zeNkqubo.
2.Tshintshela kwi Ithebhu ephezulu.
3.Cofa kwi Izinto eziNgqongileyo iqhosha.
Phantsi kweenguqulelo zeNkqubo, jonga INDLELA eyahlukileyo.
5.Khetha kwaye ucofe ku Hlela iqhosha.
6. Ibhokisi yencoko yababini iya kuvela.
7.Cofa kwi Iqhosha elitsha. Iya kongeza umgca omtsha ekupheleni koluhlu.
Faka yonke indlela (idilesi) apho ukhuphele khona kwaye wafaka izixhobo zeqonga le-SDK.
9. Xa ugqibile, cofa indawo Kulungile, iqhosha.
Emva kokugqiba le nkqubo ingentla, ngoku i-ADB inokufikelelwa kwi-Prompt yomyalelo naphi na ngaphandle kokukhankanya umendo wonke okanye isikhombisi.
Ndiyathemba ukuba eli nqaku beliluncedo kwaye ngoku ungalula Faka i-ADB kwiWindows 10 , kodwa ukuba usenayo nayiphi na imibuzo malunga nesi sifundo emva koko uzive ukhululekile ukubabuza kwicandelo lamagqabaza.
I-cd drive ayifundanga disc
i-itunes ayinakunxibelelana nale iphone kwenzeke impazamo engaziwayo 0xe
Ukusetyenziswa kwe-chrome cpu spikes windows 10
windows i-10 ibambekile kwisikrini esamkelekileyo sokulayisha
windows 10 uhlaziyo lwezitali kwi 99
Ukusetyenziswa kweediski ezili-100 windows 10 2019